विज्ञान/प्रविधि Archives - Abhiyan news
नयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वाइफाई नेपालले तीन सय ३३ रुपैयाँमै ३० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा दिन सुरु गरेको छ । कम्पनीले बजारको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्याकेजसहित बुधबारदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सबै नेपालीलाई सहुलियतपूर्ण इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित देशकै सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार वाइफाई नेपालले अहिले ३० र ५० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट […]
उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल सेवा प्रदायक (मोबाइल नम्बर)लाई अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्क (सिम)मा बदल्न सकिने गरी सरकारले ‘मोबाइल नम्बर पोर्ट्याबिलिटी’ कानुनी प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीलाई लाभ हुने गरी नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायक नेटवर्कबाट सेवा लिन सक्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्राधिकरणले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘मोबाइल […]
५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट अब ६४९ रूपैयाँमा
२४ कार्तिक २०७८, बुधबार ०२:४२ अभियान न्यूजLeaveaComment on ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट अब ६४९ रूपैयाँमा
इन्टरनेट सेवाप्रदायक सिजीनेटले ‘सुपर सस्तो प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत मासिक ६४९ रूपैयाँमा ग्राहकले ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्राप्त गर्नसक्ने छन् । त्यस्तै तीन महिनाको प्याकेजअन्तर्गत १९ सय ४७ रुपैयाँमा ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने ६ महिनाको शुल्क तीन हजार ८९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । वार्षिक ग्राहकले सात हजार ७८८ […]
१२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०१:५८ अभियान न्यूज4 Comments on फेसबुकको नाम परिवर्तन भयो, नया नाम सार्बजनिक !
गलत सूचना र समाचारको सम्प्रेषण अनि बारम्बार प्रयोगकर्ताको डेटा लिक भएका कारण धूमिल हुँदै गएको फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम नै परिवर्तन गरेको छ । स्थापनाको १७ वर्षपछि बिहीबार फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम अबदेखि ‘मेटा’ राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र ओकुलसको मुख्य कम्पनीको नाम अब मेटा इङ्क हुनेछ । बिहीबार […]
विश्वभर बन्द भएको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप ६ घण्टा पछि पुन: सुचारु
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०२:३७ अभियान न्यूजLeaveaComment on विश्वभर बन्द भएको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप ६ घण्टा पछि पुन: सुचारु
विश्वभर बन्द भएको फेसबुक इंकको एपहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप करिब सात घण्टा पछि पुन: सुचारु भएको छ । डाउनडिटेक्टरका अनुसार फेसबुकले सन् २००८ पछि हालसम्मकै ठूलो अवरुद्धको सामना गरेको हो । हिजो साँझ देखि बन्द भएको फेसबुकको फोटो शेयरिङको एप इन्टाग्रामदेखि म्यासेजिङ एपहरू ह्वाट्सएप र म्यासेन्जर पनि बन्द भएका थियो । यसले विश्वभरका करिब […]
१७ आश्विन २०७८, आईतवार ०५:४८ अभियान न्यूजLeaveaComment on टेलिकमको बिशेष अफर : १२५ रुपैयाँमा ४ जीबी डेटासँगै १०० मिनेट भ्वाइस कल
नेपाल टेलिकमले आफ्ना फोरजी प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले १२५ रुपैयाँमा ४ जीबी डेटा र १०० मिनेट भ्वाइस कल भएको प्याकेज ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार यो अफरमा प्राप्त हुने चार जीबी डेटा मध्ये एक जीबी अलनेट (टुजी, थ्रीजी र फोरजी) डेटाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भने बोनसको रुपमा प्राप्त हुने तीन […]
वर्ल्डलिंकको दशैंमा अफरै अफर, १६०० रुपैयाँमै १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट र नेटटिभी जोड्ने होइन त !
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०३:५३ अभियान न्यूजLeaveaComment on वर्ल्डलिंकको दशैंमा अफरै अफर, १६०० रुपैयाँमै १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट र नेटटिभी जोड्ने होइन त !
देशको ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले ‘दशैंको बहार, डबल उपहार’ ल्याएको छ । यो अफरअन्तर्गत कम्पनीले ग्राहकका लागि पुरानै मूल्यमा दोब्बर स्पिडको इन्टरनेट प्याकेज घोषणा गरेको छ । साथै वार्षिक प्याकेज खरिद गर्दा निःशुल्क जडानसहित करिब २० हजार मूल्य पर्ने सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । यसअन्तर्गत ग्राहकले नेटटिभी सब्स्क्रिप्सन, सेटटप बक्स, डुअल ब्यान्ड राउटर, […]
२ आश्विन २०७८, शनिबार १३:४७ अभियान न्यूजLeaveaComment on सिमकार्ड कसको नाममा छ कसरी थाहा पाउने ?
आफ्नो नाममा सिम कार्ड हुनु अब अनिवार्य जस्तै भएको छ । नागरिक एप चलाउन होस् वा सरकारले जारी गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रकै लागि किन नहोस् सिमकार्ड आफ्नो नाममा हुनु अनिवार्य नै भएको छ । यसरी सिमकार्डसँग विभिन्न सेवा प्रयोग गर्न प्रयोकगर्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सिमकार्ड आफ्नै नाममा बनाउनु पर्ने भएको छ । अर्को तर्फ एक […]
धेरैजसो प्रयोगकर्ताले नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीको डिजिटल वालेट नमस्ते पेको मोबाइल एप नचलेको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले मंगलबार देखि व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको वालेट मोबाइलमा डाउनलोड नै नहुने र भइहाले पनि क्र्याश हुने समस्या देखिन थालेको हो । पहिलो दिन गुगल प्ले स्टोरमा सर्च गर्दा समेत भेटाउन मुस्किल देखिएको […]
नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटबिना नै पैसा तिर्न मिल्नेगरी ‘नमस्ते पे’ वालेट सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयूक्त लगानीमा यो वालेट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नमस्तेपे वालेटको व्यवसायिक भुक्तानी सेवा मंगलवारबाट शुरु भएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठले नमस्ते पेको सञ्चालनका लागि छुट्टै कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल पेमेन्ट’ कम्पनी संचालनमा […]